पहिलो पटक कतारले न्यूनतम तलब तोक्यो, नेपालीलाई फाइदा कि घाटा ?:: लिगलिग खबर
मङ्सिर १, दोहा । कतार सरकारले पहिलोपटक विदेशी कामदारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपछी अब कतारमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने जो कोहि बिदेशी नागरिकले न्युनतम तोकिएको तलब पाउनैपर्ने हुन्छ ।
न्युनतम तलब बाहेक काताममा कामदारले खान/बस्न भने निशुल्क पाउनेछन् । साथै स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सुविधा पनि निशुल्क नै हुनेछ ।
सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न लागेको कतारले विदेशी कामदारमाथि भइरहेको व्यवहारका विषयमा आलोचना खेप्दै आएको थियो । कतारी श्रममन्त्री नाउमीले भने अनुसार सुधार प्रयास यतिमै रोकिनेछैन, उनि भन्छन- ‘यो हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिवद्धता हो र आगामी दिनमा थप सुधारका कामहरु देख्नुहुनेछ ।’
नेपालीलाई फाइदा कि घाटा ?
कतारले तोकेको यो न्यूनतम तलव अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । नेपालले यसअगाडी नै कतार जाने नेपाली कामदारको न्यूनतम तलव ९ सय रियाल र खाने बस्ने शुल्क ३ सय हुनुपर्ने नियम लागू गरिसकेकोले कतारको न्युनतम तलबको असर नेपाललाई पर्दैन तर स्वास्थ्य तथा उसले गर्ने बिभिन्न सुधारमा भने नेपाली कामदारलाई पनि फाइदा पुग्नेछ ।
नेपालले कतारको लागि बिदेशीक रोजगारको श्रम स्वीकृति लिंदानै सम्झौता बमोजिमको न्युनतम तलब तथा सेवा सुबिधा हेरेर कतारमा श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । कतारले अहिले ल्याएको न्यूनतम तलवमान नेपाली कामदारले पाउँदै आएको तलवभन्दा धेरै कम हो ।
टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता , ६५ लाख जनतामा उच्च गतिको डाटा